1 Na afei emi, aMormon, bmerekyerɛw dza ɔfa ndzɛmba a mehu na matse nyinara ho nsɛm na moto no dzin Mormon Nwoma no.
2 Na aber a aAmmaron dze kyerɛwsɛm no siei maa Ewuradze no mu no, ɔbaa me nkyɛn, (aber no nna medzi mfe du, na mehyɛɛ ase dɛ bmurusũa nwoma dɛ mbrɛ mo nkorɔfo hɔn nwomasũa tse ho) na Ammaron see me dɛ: Muhu dɛ eyɛ abofra a edwe na ehyɛ adze so nsew;
3 Dɛm ntsi, aber a ibedzi bɛyɛ mfe eduonu anan no, mebɛpɛ dɛ ebɛkaakaa ndzɛmba a ahyɛ no nsew a ɔfa dɛm nkorɔfo yi ho; na sɛ idzi dɛm mfe no a kɔ Antum asaase do, na kɔ koko bi a wɔfrɛ no aShim do; na hɔ na medze kyerɛwsɛm krɔnkrɔn a woekrukye a ɔfa dɛm nkorɔfo yi ho esie ama Ewuradze.
4 Na hwɛ, ebɛfa aNephi mprɛtse no ama woho; na egyaa dza aka no wɔ n’ananmu hɔ; na ibokrukye ndzɛmba nyina a ehu wɔ nkorɔfo yi ho wɔ Nephi ne mprɛtse no do.
5 Na emi, Mormon, meyɛ aNephi n’asenyi, (na m’egya ne dzin dze Mormon) na mekaa ndzɛmba a Ammaron hyɛɛ me dɛ menkã no.
6 Na ɔbaa dɛ midzii mfe dubiako no, m’egya tuur me dze me kɔr anaafo afamu asaase do, Zarahemla asaase mpo do.
7 Adan akata asaase no n’enyi nyinara do, na nkorɔfo a wɔwɔ do no dɔɔ sõ ara yie, hɔn dodow tse dɛ mpoano anhwea.
8 Na ɔbaa dɛ afe yi mu ɔkõ hyɛɛ ase wɔ Nephifo no mu, dɛm nkorɔfo no nye Nephifo na Jacobfo nye Josephfo na Zoramfo; na ɔkõ yi so sii Nephifo, na Lamanfo nye Lemuelfo na Ishmaelfo mu.
9 Afei Lamanfo na Lemuelfo nye Ishmaelfo no wɔfrɛɛ hɔn nyinara Lamanfo, na ekuw ebien no nye Nephifo nye Lamanfo.
10 Na ɔbaa dɛ ɔkõ no hyɛɛ ase wɔ hɔn mu wɔ Zarahemla kurow ne nkyɛn wɔ Sidon esu ho.
11 Na ɔbaa dɛ Nephifo no boaboaa hɔn mbanyin ano, na hɔn dodow twa mu mpemeduasa. Na ɔbaa dɛ dɛm afe yi mu wodzii akõ ara yie na Nephifo dzii Lamanfo no do konyim na wokunkum hɔn mu pii.
12 Na ɔbaa dɛ Lamanfo no sesaa hɔn akwan, na wonyaa asomdwee wɔ asaase no do, na wonyaa asomdwee bɛyɛ mfe anan ntamu a bɔgya biara enngu.
13 Mbom emumuyɛdze kɔr do wɔ asaase n’enyi nyinara do araa ma Ewuradze faa an’esuafo adɔfo hɔn no kɔree, na anwanwadze ne yɛ nye ayarsa twaa wɔ asaase no do osian nkorɔfo no hɔn emumuyɛ ntsi.
14 Na aakyɛdze biara emmfi Ewuradze nkyɛn ammba, na bSunsum Krɔnkrɔn no ammba obiara do, osian hɔn emumuyɛ nye hɔn cekyingye ntsi.
15 Na emi, nna medzi mfe duenum na modwe kakra, dɛm ntsi Ewuradze baa me nkyɛn, na mosɔe hwɛɛ na muhun Jesus ne papayɛ.
16 Na mobɔɔ mbɔdzen dɛ mebɛkã nsɛmpa no akyerɛ dɔm yi, na mbom wɔtoow m’anomu, na wɔbraa me dɛ mma mennkã nsɛmpa no nnkyerɛ hɔn; na hwɛ, wɔdze enyidaho aatsew etua wɔ hɔn Nyankopɔn do; na bwoyii esuafo adɔfo no fii asaase no do kɔree, osian hɔn emumuyɛ ntsi.
17 Mbom mokɔr do tsenaa hɔn mu, na wɔbraa me dɛ mma mennkã nsɛmpa no nnkyerɛ hɔn, osian hɔn akomadzen ntsi; na osian hɔn akomadzen ntsi wɔdze andom kãa asaase no maa hɔn.
18 Na dɛm Gadianton edwotwafo yi a wɔafora Lamanfo mu no dɔree wɔ asaase no do na dɔm a wɔwɔ hɔ no hyɛɛ ase dɛ wɔdze hɔn aegudze rusuma asaase no mu; na no ho yɛɛ tor, osiandɛ Ewuradze adom asaase no, dɛm ntsi woenntum ennsuo mu, anaadɛ hɔn nsa annkã bio.
19 Na ɔbaa dɛ ebisatsirfo, nye abayifo, nye nkɔngyaayifo soɛree dze abɔnsam no tum yɛɛ edwuma wɔ asaase n’enyi nyinara do, mpo ma Abinadi ne nsɛm a ɔkãe nyina nye Samuel, Lamannyi no so nedze nyina baa mu.
KK Mormon, Nephi Nkɔnhyɛnyi.
M ne N 1:1, 11. KK Mprɛtse.
KK Sunsum Krɔnkrɔn.
Hel. 13:18–20; Ether 14:1–2.